Wararkii ugu dambeeyay Qarax ka dhacay Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Abdirisak M Tuuryare	 On May 12, 2019
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Gaari lagu dhejiyey waxyaabaha qarxa oo ku qarxay inta u dhaxeysa agagaarka Isgoyska Taleex iyo km4 ee Wadada Maka Al-Mukarama.
Gaariga ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen in uu ahaa nooca loo yaqaano Hilux uu qarxay xilli uu marayay agagaarka Isgoyska Taleex,waxaana la sheegay in uu ka dhashay khasaaro kala duwan.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in Gaariga qarxay uu ku dhaawacmay Nin u dhashay wadanka Turkiga oo saarnaa,sidoo kalena uu ku dhaawacmay qof kale oo Soomaali ah.
Wararka qaar aan heleyno ayaa waxaa ay sheegayaan in Ninka Turkiga u dhashay ee qaraxaasi ku dhaawacmay uu Injineer ahaa,waxaana gurmad u sameeyey Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya oo goobta gaaray.
Todobadyadii la soo dhaafay ayaa Magalada muqdisho waxay amnigeeda aheyd mid wanaagsan,wallow mararka qaar ay ka dhacayaan qaraxyada nooca gawaarida lagu dhejiyo.
Howlgal saakay ka socda Magalada Gaalkacyo